MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHADAY- Qaybtii 4 | Maalmahanews
MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHADAY- Qaybtii 4
March 24, 2016 - Written by admin
Waxa aynu hore uga hadalnay seddex xaaraamood oo Jamaal xalaashaday oo kala ahaa burburintii xisbiga UDUB, iibkii UCID iyo sida dastuurku u diidan yahay nin jinsiyada kale haystaa inuu Madaxweyne isu sharaxo. Taas waxa raacda isaga oo haba yaraatee wax shaqo ah dalkan ka qaban oo aanu taariikh la wadaagin, taas raaci debed wareega uu yahay ee aanu laba bilood dalka guduhiisa joogi Karin oo balwad ay u noqotay socdaal, durbaan tun iyo xaflado casho. Ereyga aqoonyahan iyo Murashaxa Madaxweynaha ee uu sida qaldan u adeegsado. Weli dunida ma ku maqashay Murashax leh waxaan ahay aqoonyahan. Waa ruux cuqdad qaba oo wax kale oo uu iibi lahayn.
Haddaba manta aan ku soo gunaanado xaraan culus oo diinteenu aad nooga digtay, Jamaalna u ah tu uu ku faano oo weliba kolka uu ummadda la hadlaayo waxuu is ag dhigaa sawirka CITI Bank..Banki rabiwi ah oo xaraan ah, oo weliba musuqa kow ka ah oo ah meesha lacagta la xado lagu qarsado.. Aan u daadagno xaraantan culus ee uu xalaashaday.
Waxa aynu nahay ummad Islaam ah oo weliba si cad dastuurka uGu qayaxday inaan dalka lagu xukumi Karin sharci ka soo horjeeda shareecadda Islaamka. Waxa dastuurka ku cad in murashaxa Madaxweynaha loo eego ku dhaqanka iyo ku camal falka diinta. Waa inuu ahaada ruux akhlaaq ahaan iyo camal ahaaanba ku dhaqma diinta Islaamka.
Bal ka waran ninka habeen iyo maalinba ku faanaaya wax shareecda Islaamku si adag u xaaraymeysay. Nin aqoontiisa iyo khibradiisuba ku salaysantay xaaraan. Nin maalkiisu xaaran yahay oo xataa aanu ka xajiyi Karin. Nin kolka uu ummadda la hadlaayo is hot dhiga calaamadaha xaraanta ah.
Meel fog ha ka eegin iyo warar ku-tidhi ku-teen ah. Jamaal shaqo aan ahyn tan bankiga ribada ah ee Citi Bank muu qaban. Aqoon iyo khibrad kale ma leh. Diintu waxay ka joogtaa ninka u sjhaqeeya Banki riba ah weynu ognahay. Waxa Rasuulka laga soo wariyey ruux rabo qaataa waxuu ka dhigan yahay nin hooyadii ka sineystay…
KU dhaqanka diinta Islaamka maxuu ka yidhi dastuurku:
1. Diinta Qaranka Somaliland waa Diinta Islaamka; waxaana geyiga Somaliland ka reeban faafinta Diin aan ahayn Diinta Islaamka.
2. Xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa shareecadda Islaamka; waxaana reeban wixii xeer ah ee ka soo hor jeeda.
3. Dawladdu waxay oogaysaa shacaa’irta diiniga ah (umuurta Diinta); waxaanay fulinaysaa axkaamta shareecadda. Sidoo kale waxay ka hor tegaysaa fusuqa iyo anshax-xumada.
Waana sabab keeneysa inuu kolba dariiq xalaal ah aanu doonan, waayo waxa uu ku hawl galayaa waa lacag xaaran ah. Xaarantuna wey is doonataa.
Waxa la yaab ah inuu ku faano waxaan u soo shaqeeyey Bankiga ribada, oo uu waliba inooga dhigo aqoon. Waxa la gudboon inuu Alle u toobad keeno, lacagta uu ka heleynay dhammaan sadaqad u bixiyo, dibna shaqo xalaal ah u doonto, kana daayo ummadda inuu jecleysiiyo oo uga dhigo aoon ribada.
Waa kan dastuurku waxa uu ka qabo murashaxa Madaxweynha iyo ku xigeenka qodobka labaad.
SHURUUDAHA QOFKA LOO DOORANAYO MADAXWEYNE AMA MADAXWEYNE-KU-XIGEEN
Shuruudaha qofka loo dooranayo Madaxweyne ama Madaxweyne-ku-xigeen Waxa Madaxweyne loo dooran karaa qofka buuxiya shuruudaha soo socda :-
1- Waa in uu yahay muwaadin u dhashay Somaliland, oo muwaadinimo dawlad kale haysan , balse wuu noqon karaa qaxooti dal kale deggen.
2- Waa in uu muslin yahay, kuna dhaqmaa diinta Islaamka.
Aaan u dhaafo dadweynha sida iyaga oo calan tawhiidka haysta, iyagoo dastuurku ku cad yahay ku dhaqanka diinta iyo shareecda sida ay u dooran karaan nin xaarantu u macaantay ooy u tahay mid uu ku faano. Waxaan leeyahay waar dastuurka iyo diinteena aynu ixtiraamno. Ogow ruux walba waa la weydiin camalka uu ku taageero xaraan iyo xalaalba. Naftaada xisaabi intaad nooshay, yaan taageero qabiil xaqqa kaa indho tiring.
Waa adi iyo naftaada.
Cali Jaamac (Burcaatidhi)